Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo maanta yimid Garowe, si diirranna loo soo dhaweeyey. – Radio Daljir
Garowe, Sept 18 ? Mudanayaal ka ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa maanta lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaraha ee magaalada Garowe kuwaasi oo ka soo kicitimay magaalada Muqdisho.
Mudanayaashaan oo tiradoodu ay gaarayso 8 xubnood ayaa waxaa hoggaaminayey xildhibaan Xasan Abshir Faarax, waxaana garoonka diyaaraha ee magaalada Garowe ku soo dhaweeyey mas?uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland iskuguna jiray golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka iyo sidoo kale mas?uuliyiinta heer gobol iyo mid degmo ee gobolka Nugaal.
Mudanayaashaan oo war-baahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ayaa socdaalkooda ku micneeyey in uu ku qotomo sidii xal loogu heli lahaa xurgufihii colaadeed ee dhawaan ka dhacay magaalada Galkacyo kuwaasi oo sababay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira.
Xildhibaannada ayaa sheegay in ay kulamo la yeelan doonaan madaxda sar sare dawladda Puntland kaddibna ay u gudbi doonaan magaalada Galkacyo si ay qayb uga noqdaan dadaallada nabad-raadineed ee lagu doonayo in xal buuxa looga gaaro xiisadihii colaadeed ee dhawaan ka dhacay Galkacyo.
Imaatinka mudanayaashaan dawladda federaalka ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadadii ugu dambeeyey magaalada Galkacyo ay ka socdeen dadaallo wax-ku-ool ah oo ku saabsanaa dhinaca nabad-galyada ayna ku hawllanaayeen dawladda Puntland, issimada, guurti ka timid gobollo kale iyo indheergadka bulshada gobolka taasoo lagu doonayey daminta dabka colaadeed.